HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mooré Ndebele Ndonga Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
“Tafika lehibe ny vehivavy manambara ny vaovao tsara.”—SAL. 68:11.
Inona no vokatry ny fikomiana tao Edena, eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy?
Inona no nataon’ny vehivavy mpanompon’i Jehovah fahiny?
Oharina amin’ny inona ny vehivavy, noho izy ireo mandray anjara amin’ny fitoriana?
1, 2. a) Inona avy no fanomezana nomen’Andriamanitra an’i Adama? b) Nahoana Andriamanitra no nanome vady ho an’i Adama? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
MISY antony namoronan’i Jehovah ny tany. “Nataony honenana” izy io. (Isaia 45:18) I Adama no olona voalohany noforoniny, ary nataony lavorary izy. Nomeny zaridaina tsara tarehy atao hoe Edena i Adama mba honenany. Nankafizin’i Adama erỳ ireo hazo mijoalajoala sy renirano kely mikoriana ary ireo biby tia sangy. Nisy zavatra tsy ampy anefa. Nasehon’i Jehovah hoe inona izany rehefa niteny izy hoe: “Tsy tsara raha irery foana ralehilahy. Hanao mpanampy ho azy aho, ho famenony.” Nataon’i Jehovah renoky ny torimaso lalina i Adama avy eo, ary nalainy ny taolan-tehezany iray ka “nanao vehivavy tamin’ilay taolan-tehezana” izy. Faly be i Adama rehefa nifoha ka hoy izy: “Ela ny ela ka ity eto ny taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko. Hantsoina hoe Vehivavy izy, satria nalaina avy tamin’ny lehilahy.”—Gen. 2:18-23.
2 Fanomezana tena miavaka avy amin’Andriamanitra ilay vehivavy, satria mpanampy tonga lafatra ho an’i Adama. Nanana tombontsoa manokana koa izy satria afaka niteraka. “Nataon’i Adama hoe Eva ny anaran’ny vadiny, satria izy no renin’ny olombelona rehetra.” (Gen. 3:20) Nomen’Andriamanitra fanomezana tena tsara izy mivady. Nataony afaka miteraka olona lavorary izy ireo. Tokony ho lasa paradisa feno olona lavorary ny tany rehefa nandeha ny fotoana, ary hanjaka amin’ny zavamananaina hafa ny olona.—Gen. 1:27, 28.
3. a) Inona no tsy maintsy nataon’i Adama sy Eva mba hotahin’i Jehovah, nefa inona no nitranga? b) Inona no fanontaniana hodinihintsika?
3 Tsy maintsy nankatò an’i Jehovah sy nanaiky ny fahefany i Adama sy Eva, raha te hahazo an’ireo fitahiana ireo. (Gen. 2:15-17) Tsy ho tanteraka ny fikasan’Andriamanitra ho azy ireo, raha tsy izany. Nampalahelo anefa fa namitaka azy ireo i Satana “ilay menarana tany am-boalohany”, ka nanota tamin’Andriamanitra izy ireo. (Apok. 12:9; Gen. 3:1-6) Inona no vokatr’izany fikomiana izany teo amin’ny vehivavy? Inona no nataon’ireo vehivavy natahotra an’Andriamanitra fahiny? Nahoana no azo lazaina hoe “tafika lehibe” ireo vehivavy kristianina ankehitriny?—Sal. 68:11.
INONA NO VOKATR’ILAY FIKOMIANA?
4. Iza no tena nolazain’Andriamanitra fa diso, rehefa nanota ilay mpivady voalohany?
4 Natao ampamoaka i Adama rehefa nikomy. Nanala tsiny ny tenany izy ka niteny hoe: “Ilay vehivavy nomenao ahy no nanome ahy ny voan’ilay hazo, ka nihinana aho.” (Gen. 3:12) Tsy nitombina anefa izany. Sady tsy niaiky ny fahadisoany i Adama no mbola nanilika ny tsiny tamin’ilay vehivavy nomena azy sy tamin’ilay Andriamanitra be fitiavana. Samy nanota i Adama sy Eva, nefa i Adama no tena nolazain’Andriamanitra hoe diso. Izany no nahatonga ny apostoly Paoly hilaza fa ‘avy tamin’ny olona iray [Adama] no nidiran’ny ota ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana.’—Rom. 5:12.
5. Inona no voaporofo rehefa navelan’Andriamanitra hitondra ny olombelona?
5 Nataon’i Satana izay hinoan’i Adama sy Eva hoe tsy mila an’i Jehovah ho Mpitondra azy izy ireo. Nipetraka àry izao fanontaniana lehibe izao: Iza no manana zo hitondra? Tian’Andriamanitra hovaliana indray mandeha tsy miverina izany, ka navelany hitondra samirery aloha ny olombelona. Fantany fa tsy hahomby izy ireo. Loza mifanesisesy no vokatry ny fitondran’olombelona. Olona 100 tapitrisa teo ho eo no maty nandritra ny ady, tao anatin’ny zato taona lasa. Lehilahy sy vehivavy ary ankizy tsy manan-tsiny ny an-tapitrisany tamin’izy ireo. Efa betsaka àry ny porofo manamarina fa ‘tsy natao hitondra samirery ny fiainany ny olona.’ (Jer. 10:23) Izany no mahatonga antsika hanaiky an’i Jehovah ho Mpitondra antsika.—Vakio ny Ohabolana 3:5, 6.
6. Ahoana no fiheveran’ny olona ny vehivavy, any amin’ny tany maro?
6 Samy mijaly ny lehilahy sy ny vehivavy eto amin’ity tontolo fehezin’i Satana ity. (Mpito. 8:9; 1 Jaona 5:19) Ny vehivavy anefa no iharan’ny sasany amin’ny habibiana mahatsiravina indrindra. Vehivavy 1 isaky ny 3 eo ho eo eran-tany no miaritra ny herisetra ataon’ny vadiny na ny olon-tiany. Tiana kokoa ny lehilahy amin’ny kolontsaina sasany, satria heverina hoe hamelo-maso ny fianakaviana. Izy ireny koa no antenaina hikarakara ny ray aman-dreny efa antitra, na ny raibe sy ny renibe. Zaza tsy irina ny vavikely any amin’ny tany sasany. Betsaka kokoa àry ny zazavavy esorina raha mbola ao am-bohoka, raha oharina amin’ny zazalahy.
7. Nanao ahoana ny fiandohan’ny fiainan’ny lehilahy sy ny vehivavy?
7 Tena tsy tian’i Jehovah ny fampijaliana vehivavy. Manaja ny vehivavy izy ary tsy manavakavaka azy ireo. Hita tamin’ny fomba namoronany an’i Eva fa sarobidy aminy ny vehivavy. Nataony lavorary i Eva ary nataony manana toetra tsara hahatonga azy ho famenon’i Adama, fa tsy ho andevony. Rehefa nifarana àry ny andro fahenina, dia “nijery an’izay rehetra nataony Andriamanitra, ka hitany fa tena tsara izany.” (Gen. 1:31) Nataony tsara fiandohana àry ny fiainan’ny lehilahy sy ny vehivavy.
VEHIVAVY NAMPIAN’I JEHOVAH
8. a) Manao ahoana ny toetran’ny olona maro? b) Ny olona manao ahoana no ankasitrahan’i Jehovah?
8 Nitombo ny faharatsiana taorian’ilay fikomiana tany Edena. Vao mainka nanao ratsy anefa ny olona, nandritra ireo taona faramparany. Milaza ny Baiboly fa ho feno faharatsiana ny tany, mandritra ny “andro farany.” Tena “fotoan-tsarotra” tokoa izao iainantsika izao. (2 Tim. 3:1-5) Nisy foana anefa hatramin’izay ny lehilahy sy vehivavy natoky an’i Jehovah sy nankatò ny lalàny ary nanaiky ny zony hitondra. Izy ireny no ankasitrahan’i “Jehovah Tompo Fara Tampony.”—Vakio ny Salamo 71:5.
9. Firy ny olona tafavoaka velona tamin’ny Safodrano, ary nahoana izy ireo no voavonjy?
9 Noringanin’Andriamanitra tamin’ny Safodrano ireo olona nahery setra tamin’ny andron’i Noa. Raha mbola teo ny rahalahy sy anabavin’i Noa tamin’izay, dia anisan’ireo maty koa izy ireo. (Gen. 5:30) Vitsy kely no tsy ringana tamin’ny Safodrano, ary nitovy ny isan’ny lehilahy sy ny vehivavy. Izany dia i Noa sy ny vadiny, ary ny zanany telo lahy sy ny vadin’izy ireo avy. Voavonjy izy ireo satria natahotra an’Andriamanitra sy nanao ny sitrapony. Taranak’ireo olona valo narovan’i Jehovah ireo ny olona an’arivony tapitrisa ankehitriny.—Gen. 7:7; 1 Pet. 3:20.
10. Nahoana i Jehovah no nanampy an’ireo vehivavy natahotra azy fahiny?
10 Nampian’i Jehovah koa ny vehivavy vadin’ireo mpanompony tsy mivadika, taona maro tatỳ aoriana. Tsy ho nanampy an’ireny vehivavy ireny izy, raha nitaraina lava noho ny zavatra niainany izy ireny. (Joda 16) Eritrereto, ohatra, i Saraha, izay tena nanaja an’i Abrahama vadiny. Nandao ny fiainana nampiadana tao Ora izy ary lasa nifindrafindra monina sy nipetraka an-tranolay tany an-tany hafa. Tsy azo inoana anefa hoe nimenomenona izy. “Nankatò an’i Abrahama” kosa izy, “ka niantso azy hoe ‘tompo.’ ” (1 Pet. 3:6) Eritrereto koa i Rebeka, izay lasa vady tena tsara sy fanomezana avy amin’i Jehovah. Tsy mahagaga raha “raiki-pitia taminy i Isaka, ary nionona tamin’ny nahafatesan-dreniny.” (Gen. 24:67) Tena faly isika fa misy vehivavy matahotra an’Andriamanitra, toa an’i Saraha sy Rebeka, eo anivontsika.
11. Inona no manaporofo fa be herim-po i Sifra sy Poha?
11 Nihamaro be ny Israelita tamin’izy ireo andevo tany Ejipta. Namoaka didy àry i Farao fa tokony hovonoina ny zazalahy hebreo rehetra vao teraka. Inona anefa no nataon’i Sifra sy Poha, izay angamba lehiben’ny mpampivelona? Natahotra an’i Jehovah sy be herim-po ireo mpampivelona hebreo ireo, ka tsy nety namono an’ireo zazalahy hebreo. Nomen’Andriamanitra ankohonana izy ireo ho valisoany.—Eks. 1:15-21.
12. Inona no nampiavaka an’i Debora sy Jaela?
12 Nampian’i Jehovah koa i Debora, mpaminanivavy tamin’ny andron’ny mpitsara. Nampahery an’i Baraka Mpitsara izy, ary anisan’ny nanampy ny Israelita mba ho afaka tamin’ireo mpampahory azy. Nilaza anefa i Debora fa tsy i Baraka no hahazo voninahitra rehefa ho resy ny Kananita. “Eo an-tanam-behivavy” mantsy no hatolotr’Andriamanitra i Sisera, lehiben’ny tafika kananita. Izany tokoa no nitranga rehefa namono an’i Sisera i Jaela, vehivavy tsy israelita.—Mpits. 4:4-9, 17-22.
13. Inona no lazain’ny Baiboly momba an’i Abigaila?
13 Vehivavy niavaka koa i Abigaila, izay velona tamin’ny taonjato faha-11 T.K. Malina izy fa i Nabala vadiny kosa nasiaka sy ratsy toetra ary tsy nisaina. (1 Sam. 25:2, 3, 25) Niaro ny fananan’i Nabala i Davida sy ny olony. Tsy nomeny na inona na inona anefa izy ireo rehefa mba nangataka vatsy taminy, fa ‘novazavazainy sy nanaovany teny henjana.’ Tezitra be i Davida ka nikasa hamono an’i Nabala sy ny olony. Ren’i Abigaila izany, ka nitondrany sakafo sy zava-pisotro i Davida sy ny olony. Tsy nisy ra latsaka indray àry. (1 Sam. 25:8-18) Hoy i Davida tamin’i Abigaila: “Hisaorana anie i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izay naniraka anao androany mba hihaona amiko!” (1 Sam. 25:32) Nalain’i Davida ho vady i Abigaila rehefa maty i Nabala.—1 Sam. 25:37-42.
14. Nandray anjara tamin’ny inona ireo zanakavavin’i Saloma? Inona koa no ataon’ny anabavy maro ankehitriny?
14 Maro ny lehilahy sy vehivavy ary ankizy maty, rehefa nandrava an’i Jerosalema sy ny tempoliny ny tafika babylonianina tamin’ny 607 T.K. Naorina indray ny mandan’ilay tanàna tamin’ny 455 T.K., ary i Nehemia no niandraikitra ny fanorenana. Nandray anjara tamin’izany ny zanakavavin’i Saloma, andrianan’ny antsasaky ny faritanin’i Jerosalema. (Neh. 3:12) Faly izy ireo nanao asa noheverina ho ambany. Maro koa ny anabavy manao asa isan-karazany mifandray amin’ny fanorenana ankehitriny, ary faly izy ireo manao izany.
VEHIVAVY NATAHOTRA AN’I JEHOVAH TAMIN’NY ANDRON’I JESOSY
15. Inona no tombontsoa nomen’i Jehovah an’i Maria?
15 Nisy vehivavy hafa koa nomen’i Jehovah tombontsoam-panompoana. Anisan’izy ireny ilay virjiny atao hoe Maria, izay efa fofombadin’i Josefa. Niasa taminy ny fanahin’i Jehovah ka bevohoka izy. Nahoana Andriamanitra no nifidy azy mba ho renin’i Jesosy? Azo inoana fa hitany hoe nanana ny toetra tsara nilaina i Maria, ka ho afaka hitaiza an’ilay zanany lavorary mandra-pahalehibeny. Tombontsoa lehibe tokoa ny hoe renin’ilay lehilahy miavaka indrindra teto an-tany.—Mat. 1:18-25.
16. Ahoana no fiheveran’i Jesosy ny vehivavy? Manomeza ohatra.
16 Tsara fanahy be tamin’ny vehivavy i Jesosy. Diniho ny nataony tamin’ny vehivavy iray nandeha ra nandritra ny 12 taona. Nanatona an’i Jesosy avy tao aoriana ilay vehivavy ary nikasika ny akanjony, raha mbola tao anaty vahoaka i Jesosy. Tsy nibedy azy anefa i Jesosy fa tsara fanahy taminy. Hoy izy: “Ny finoanao no nahasitrana anao, anaka. Mirary soa ho anao aho, ary ho sitrana amin’iny aretina nampijaly anao iny anie ianao!”—Mar. 5:25-34.
17. Inona no fahagagana nitranga tamin’ny Pentekosta taona 33?
17 Nisy vehivavy anisan’ny mpianatr’i Jesosy nikarakara azy sy ny apostoliny. (Lioka 8:1-3) Vehivavy koa ny sasany tamin’ireo olona 120 teo ho eo, izay nahazo fanahy masina tamin’ny fomba mahagaga tamin’ny Pentekosta taona 33. (Vakio ny Asan’ny Apostoly 2:1-4.) Efa niresaka mialoha momba izany i Jehovah. Hoy izy: ‘Handatsahako ny fanahiko ny karaza-nofo rehetra, ka ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo haminany, ary na ny mpanompolahy sy ny mpanompovavy aza dia handatsahako ny fanahiko.’ (Joela 2:28, 29) Voaporofo tamin’io fahagagana tamin’ny Pentekosta io fa tsy nankasitraka ny Israely nivadi-pinoana intsony Andriamanitra. Ny “Israelin’Andriamanitra” indray no nankasitrahany, ary misy vehivavy ireo anisan’izy io. (Gal. 3:28; 6:15, 16) Anisan’ireo vehivavy nitory tamin’ny taonjato voalohany koa izy efa-bavy zanak’i Filipo mpitory ny vaovao tsara.—Asa. 21:8, 9.
“TAFIKA LEHIBE” NY VEHIVAVY
18, 19. a) Inona no tombontsoa omen’Andriamanitra ny lehilahy sy vehivavy? b) Ahoana no iantsoan’ny mpanao salamo an’ireo vehivavy mitory ny vaovao tsara?
18 Nisy lehilahy sy vehivavy vitsivitsy nikaroka ny fivavahana marina, tamin’ny 1875 tany ho any. Izy ireo no nisantatra ny fitoriana ataontsika ankehitriny. Nanatanteraka an’ity faminanian’i Jesosy ity izy ireo: “Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity, ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.”—Mat. 24:14.
19 Vitsy ny Mpianatra ny Baiboly taloha, nefa lasa Vavolombelon’i Jehovah 8 000 000 eo ho eo izy ireo izao. Misy olona 11 000 000 mahery koa liana amin’ny Baiboly sy ny asantsika, ka nanatrika ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Jesosy tamin’ny 2013. Vehivavy ny ankamaroan’izy ireo. Vehivavy koa ny ankamaroan’ireo mpitory manontolo andro 1 000 000 mahery maneran-tany. Omen’Andriamanitra tombontsoa tokoa ireo vehivavy tsy mivadika, ka anisan’ireo manatanteraka an’ilay tenin’ny mpanao salamo hoe: “Avy amin’i Jehovah izay zavatra holazaina, ary tafika lehibe ny vehivavy manambara ny vaovao tsara.”—Sal. 68:11.
“Tafika lehibe” tokoa ireo vehivavy mitory ny vaovao tsara (Fehintsoratra 18, 19)
HAHAZO VALISOA LEHIBE IREO VEHIVAVY MATAHOTRA AN’ANDRIAMANITRA
20. Inona no azo ianarana mandritra ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana na ny fianarana samirery?
20 Tsy ho voatanisa eto daholo ireo vehivavy tsy mivadika resahin’ny Baiboly. Afaka mamaky ny tantaran’izy ireny anefa isika ao amin’ny Baiboly sy ny boky aman-gazety. Afaka misaintsaina ny tsy fivadihan’i Rota, ohatra, isika. (Rota 1:16, 17) Hanatanjaka ny finoantsika koa ny mamaky ny bokin’i Estera sy ny lahatsoratra momba an’io mpanjakavavy io. Mahasoa ny mianatra ny tantaran’ireny vehivavy ireny sy ny mpanompon’i Jehovah hafa, mandritra ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana. Raha mipetra-drery kosa isika, dia afaka manao izany mandritra ny fianarana samirery.
21. Ahoana no ampisehoan’ny vehivavy mpanompon’i Jehovah fa tsy mivadika izy ireo?
21 Miharihary fa tena tahin’i Jehovah ny asa fitoriana ataon’ireo anabavy kristianina, ary manohana azy ireo ao anatin’ny sarotra izy. Maro tamin’izy ireny no nankatò an’i Jehovah, ka nijaly sy namoy ny ainy mihitsy aza nandritra ny fitondrana nazia sy kominista. Tsy nivadika anefa izy ireo satria nampian’i Jehovah. (Asa. 5:29) Manohana ny zon’i Jehovah hitondra ireo anabavintsika sy ny mpanompon’i Jehovah rehetra, na taloha na ankehitriny. Toy ny tamin’ny andron’ny Israely fahiny, dia mihazona ny tanan’izy ireo i Jehovah sady miteny hoe: “Aza matahotra fa hanampy anao aho.”—Isaia 41:10-13.
22. Inona no tombontsoa ho azontsika tsy ho ela?
22 Tsy ho ela dia hanova ny tany ho paradisa ny lehilahy sy vehivavy matahotra an’Andriamanitra. Hampian’izy ireo mba hahalala ny fikasan’i Jehovah koa ireo olona an-tapitrisany hatsangana amin’ny maty. Mandra-pahatongan’izany, dia aoka isika hankasitraka ny tombontsoa manompo an’i Jehovah “amim-piraisan-kina”, na lehilahy isika na vehivavy.—Zef. 3:9.